Ndị ọkachamara na Semalt maara otú e si arụ ọrụ gị na Mgbasa Ozi Obodo
Ọ bụrụ na ị dị ka ọtụtụ ndị ọchụnta ego, atụmanya nke ịhapụ oge maka mgbasa ozi, karịsịa mgbe ị na-enweghị ezigbo ego ị ga-arụ ọrụ na ya, nwere ike imeri. Buru nke a, enwere ozi ọma. Nkwado ebe obibi bụ mgbasa ozi nke ụlọ ọrụ onwe ha nwere ike ime nke ọma ọbụlagodi na enweghi ego ọ bụla.
Igor Gamanenko, ọkachamara na - ahụ maka Semalt Ọrụ Ntanetị, kelee ụzọ 5 kachasị mkpa iji tụlee:
1. Nwee egwu netwọk ịntanetị
Mgbe ị họrọla ebe ịkwesịrị itinye ego gị n'ọrụ (ma eleghị anya ị ga-eji ego gị kwadoro ego), ị nwere ike iji nnukwu ngwá ọrụ gị na netwọk n'ịntanetị na-arụ ọrụ dị ka Cradle. Nke a pụtara na ị gaghị akwụsị ihe ị na-eme kwa oge ọ bụla ị chọrọ ihe site na netwọk netwọk weebụ.
2 - teleprompter software free download. Achọrọ ndị ahịa gị nwere ike ịnweta mpaghara? I kwesịkwara.
Iso ndị gị na-emekọ ihe n'ịntanetị bụ ụzọ dị egwu ị ga-esi gbasaa ma zukọta maka ọkwa gị maka ndị na-ahụ maka weebụ. Ọ bụ ihe ọzọ dị iche iche iji nweta ozi ahụ gbasara azụmahịa gị n'akụkụ niile. 8)
3. Ịkwado obodo / akwalite obodo
Maka ọnụnọ dị n'ịntanetị nke ga-adọta seo engines na ndị ahịa nwere ike iji ha eme ihe, ịkwesịrị ịzụlite otu nọmba ahụ nke amaokwu (dị mma!). Ihe ndi ozo bu ihe ndi a siri ike igosi ahia gi bu otu obodo. Ihe ederede na-eme ka azụmahịa gị bụrụ ihe a na-ahụ anya na nke a pụrụ ịdabere na ya engines ọchụchọ .
4. Mee ka mma
Ọ bụrụ na ị mara niche gị, ahịa gị ezubere iche ga-adị irè karịa ịnwa ịchụso isiokwu dị oké ọnụ ahịa ma ọ bụ kpuchie ọbụlagodi otu ọwa na ikpokọta ọdịnaya. Kasị mma ị mara ndị ahịa gị, na n'ihu ị nwere ike itinye uche na ihe a na-akpọ "ogologo ọdụ keywords" na mgbasa ozi akwụ ụgwọ gị.
5. Jikwaa akara gị na weebụ
Malite site na Google My Business na hụ na ihe niile dị mkpa-aha azụmahịa, adreesị, na nọmba ekwentị dị mma. Nke a bụ isi maka nchịkọta ọchụchọ mpaghara. Akwụkwọ ndị a pụrụ ịdabere na ya na-ewulite ntụkwasị obi na engines ọchụchọ. Na ohere na ị nwere aha, ọnọdụ, ma ọ bụ nọmba telivishọn na ebe dị iche iche na weebụ, ihe nchọgharị weebụ nwere ike ọbụna iche echiche ndị a na òtù ndị ọzọ.